Published Sat Jan 11 2020 13:52:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
China’s foreign minister is to arrive in Zimbabwe as part of a five-nation tour of Africa that seeks to promote the Asian giant's economic and political interests on the continent. Zimbabwe’s foreign minister Sibusiso Moyo described the visit by Wang Yi, one of China’s most powerful political figures, as evidence of “the strategic comprehensive partnership” between Zimbabwe and the Asian giant. He told Zimbabwe's state-run media that Wang would pursue China's economic interests during the visit. Like in much of Africa, China has a strong presence in Zimbabwe, with investments spanning from energy to agriculture, mining and trade in wildlife.
China's foreign minister often makes an African tour at the beginning of the year to emphasize the importance that Beijing places on the continent.
Like in much of Africa, China has a strong presence in Zimbabwe, with investments spanning from energy to agriculture, mining and trade in wildlife. With Zimbabwe's economy in a downward spiral, some analysts say that Wang will, behind closed doors, urge Zimbabwean leaders to improve the country's economic performance and to honor their debt repayments to China.
Zimbabwe's longstanding ties with China increased in 2003 when it adopted a ‘Look East’ policy after western countries imposed sanctions.
China's growing involvement has been criticized by Zimbabwe's opposition and others for allegedly exploiting local workers and the country's natural resources.
Wang is also scheduled to visit Burundi where President Pierre Nkurunziza, under pressure for alleged human rights abuses, has previously described China as “a best friend.” Burundi is the beneficiary of Chinese assistance in areas such as education and construction of a state house. China is involved in the country's energy and agriculture.